Fomba fiampangana EV
Karazan'ireo mpampifandray EV Charging samihafa
Betsaka ny antony tokony handinihana ny famadihana ny iray mandeha amin'ny herinaratra avy amin'ny fiara mandeha amin'ny lasantsy.Ny fiara elektrika dia mangina kokoa, ambany ny vidin'ny fandidiana ary tsy dia mamokatra faran'izay betsaka ny gazy azo alefa amin'ny kodiarana. Tsy ny fiara elektrika sy ny plug-in rehetra anefa no foronina mitovy. Ny mpampitohy fiampangana EV na karazana plug mahazatra dia miovaova amin'ny jeografia sy modely.
Ahoana no ahalalako izay plug-in amin'ny fiaran'ny heriko ampiasaina?
Na dia mety ho toa be dia be aza ny fianarana dia tena tsotra izany. Ny fiara mandeha amin'ny herinaratra rehetra dia mampiasa ny mpampitohy izay fenitra amin'ny tsenan'izy ireo manokana ho an'ny haavon'ny ambaratonga 1 sy haavo 2, Amerika Avaratra, Eoropa, Sina, Japon, sns. Tesla no hany tokana, fa ny fiarany rehetra kosa dia mitondra tariby adaptatera mankany fahefana ny fenitry ny tsena. Ny tobim-piantsenana Tesla haavo 1 na 2 dia azo ampiasaina amin'ny fiaran'ny herinaratra tsy Tesla ihany koa, saingy mila mampiasa adapter azo vidiana amin'ny mpivarotra antoko fahatelo izy ireo. Ho an'ny famandrihana haingana amin'ny DC, Tesla dia manana tambajotram-piantsonan'ny tobin'ny Supercharger izay ny fiara Tesla ihany no afaka mampiasa, tsy misy mpampifanaraka miasa amin'ireo toeram-piantsonana ireo satria misy ny fizotran'ny fanamarinana. Ny fiara Nissan sy Mitsubishi dia mampiasa ny fenitra japoney CHAdeMO, ary saika ny fiara elektrika rehetra dia mampiasa ny fenitra fiampangana CCS.
Fitsipika Amerikanina Avaratra karazana 1 EV Plug
Sokajy 1 EV Socket
Fitsipika Eoropeana IEC62196-2 Connecteur EV Type 2
Socket 2 fidirana
Ny mpampifandray karazana 2 dia antsoina matetika hoe mpampifandray 'Mennekes', taorian'ny mpanamboatra alemanina namorona ny endrika. Manana plug 7-pin izy ireo. Manoro hevitra ireo mpampitohy Type 2 ny EU ary indraindray izy ireo dia tondroin'ny fenitra ofisialy IEC 62196-2.
Ny karazana mpampitohy EV izay mampandoa vola any Eropa dia mitovy amin'ireo any Amerika Avaratra, saingy misy ny fahasamihafana roa. Voalohany, ny herinaratra an-trano mahazatra dia 230 volts, efa ho avo roa heny noho ny an'ny Amerika Avaratra. Tsy misy fiampangana "level 1" any Eropa, noho io antony io. Faharoa, raha tokony ho ny mpampitohy J1772, ny mpampitohy IEC 62196 Type 2, izay matetika antsoina hoe mennekes, no fenitra ampiasain'ny mpanamboatra rehetra afa-tsy Tesla any Eropa.
Na eo aza izany dia nanova ny Model 3 i Tesla vao haingana avy amin'ny mpampitohy azy ho an'ny mpampitohy Type 2. Ny fiara Tesla Model S sy Model X amidy any Eropa dia mbola mampiasa ny mpampitohy Tesla, saingy ny tombantombana dia izy ireo koa dia hivadika ho any amin'ny mpampitohy Type 2 eropeana.
CCS dia mijoro ho an'ny Combined Charging System.
Combined Charging System (CCS) dia mandrakotra ny lozisialy Combo 1 (CCS1) sy Combo 2 (CCS2).
Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2010 dia nanambatra ny lozisialy Type1 / Type 2 miaraka amin'ny mpampitohy DC matevina ny mpamorona andiany manaraka mba hamoronana CCS 1 (Amerika Avaratra) sy CCS 2.
Ity mpampitohy mitambatra ity dia midika fa ny fiara dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny mpampifandray ao amin'ny tapany ambony na ny fiampangana DC amin'ny alàlan'ny faritra mpampifandray 2. Ohatra, Raha manana socket CCS Combo 2 ao anaty fiara ianao ary maniry mandoa vola ao an-trano amin'ny AC, dia ampidiro ao fotsiny ny plug Type 2 mahazatra anao ao amin'ny tapany ambony. Ny faritra DC ambany amin'ny mpampitohy dia foana foana.
Any Eropa, DC dia mamaly haingana dia mitovy amin'ny any Amerika Avaratra, izay CCS no fenitra ampiasain'ny mpamokatra saika rehetra afa-tsy Nissan, Mitsubishi. Ny rafitry ny CCS any Eropa dia manambatra ny mpampitohy Type 2 miaraka amin'ny tsimok'aretina haingana dc toy ny mpampitohy J1772 any Amerika Avaratra, ka na dia antsoina koa hoe CCS aza dia mpampifandray kely hafa. Modely Tesla 3 izao dia mampiasa mpampitohy CCS Eoropeana.
CHAdeMO: Ny japoney TEPCO japoney dia namolavola CHAdeMo. Io no fari-pitsipika japoney ofisialy ary saika ny charger fast rehetra Japoney DC dia mampiasa mpampitohy CHAdeMO. Hafa izany any Amerika Avaratra, izay i Nissan sy Mitsubishi no hany mpanamboatra mivarotra fiara mandeha amin'ny herinaratra mampiasa ny mpampifandray CHAdeMO. Ny hany fiara mandeha herinaratra izay mampiasa ny karazana mpampitohy fihenan'ny CHAdeMO EV dia ny Nissan LEAF sy ny Mitsubishi Outlander PHEV. Miala amin'ny CHAdeMO i Kia amin'ny taona 2018 ary manolotra CCS izao. Ireo mpampifandray CHAdeMO dia tsy mizara ny ampahan'ny mpampitohy amin'ny fidirana J1772, izay mifanohitra amin'ny rafitra CCS, ka mitaky fidirana ChadeMO fanampiny amin'ny fiara izy ireo ary mitaky seranan-tsambo lehibe kokoa
Tesla: Tesla dia mampiasa mpampitohy hafainganam-pandeha haavo 1, haavo 2 ary DC ihany. Izy io dia mpampifandray Tesla manan-kaja izay manaiky ny herinaratra rehetra, ka raha ny fenitra hafa dia takiana, tsy ilaina ny manana mpampitohy hafa manokana ho an'ny vola haingana DC. Ny fiara Tesla ihany no afaka mampiasa charger DC haingana, antsoina hoe Supercharger. Tesla nametraka sy nitazona ireo gara ireo, ary ho an'ny fampiasan'ny mpanjifa Tesla irery ihany. Na dia misy tariby adaptatera aza, dia tsy ho azo atao ny mandefa EV tsy tesla ao amin'ny gara Tesla Supercharger. Izany dia satria misy fizotran'ny fanamarinana izay mamaritra ny fiara ho Tesla alohan'ny hanomezany ny herinaratra. Ny fiampangana ny Tesla Model S amin'ny dia lavitra amin'ny alàlan'ny Supercharger dia afaka manampy 170 kilaometatra ny elanelana ao anatin'ny 30 minitra fotsiny. Saingy ny kinova V3 an'ny Tesla Supercharger dia mampiakatra ny vokatra azo avy amin'ny 120 kilowatts hatramin'ny 200 kW. Ilay Supercharger vaovao sy nohatsaraina, izay natomboka tamin'ny taona 2019 ary manohy mivoatra, dia manafaingana ny 25 isan-jato. Mazava ho azy, ny elanelam-potoana sy ny famerana dia miankina amin'ny lafin-javatra maro — manomboka amin'ny herin'ny batterin'ny fiara ka hatramin'ny hafainganan'ny famahanana ny charger an-tsambo, sy ny maro hafa — koa "mety miovaova ny kilometatrao."
China GB / T EV Connector Connector
Sina no tsena lehibe indrindra - hatreto - ho an'ny fiara elektrika.
Namolavola ny rafi-pandefasan'izy ireo manokana izy ireo, izay nantsoin'ny fomba ofisialy momba ny fenitra Guobiao ho: GB / T 20234.2 sy GB / T 20234.3.
Ny GB / T 20234.2 dia mandrakotra ny fiampangana AC (dingana tokana ihany). Ny plugs sy ny faladiany dia toa ny Type 2, fa ny tsimatra sy ny receptor dia avadika.
GB / T 20234.3 dia mamaritra ny fomba fiasan'ny DC haingana. Iray monja ny rafitra famandrihana DC manerana ny firenena any Shina, fa tsy rafitra mifaninana toa ny CHAdeMO, CCS, novaina Tesla, sns, hita any amin'ny firenen-kafa.
Mahaliana fa ny Fikambanana CHAdeMO monina any Japon sy ny China Electricity Council (izay mifehy ny GB / T) dia miara-miasa amin'ny rafitra haingana DC izay fantatra amin'ny hoe ChaoJi. Tamin'ny volana aprily 2020, nanambara ny kaody farany antsoina hoe CHAdeMO 3.0 izy ireo. Io dia hamela ny famerenam-bidy mihoatra ny 500 kW (fetra 600 amps) ary hanome fiampangana indroa ihany koa.Ny fiheverana an'i Shina no mpanjifa lehibe indrindra an'ny EVs, ary firenena maro isam-paritra no mety hiditra ao anatin'izany i India, ny fandraisana andraikitra CHAdeMO 3.0 / ChaoJi dia mety handroaka ny CCS rehefa mandeha ny fotoana satria izy no hery matanjaka amin'ny fameperana.